Umatshini wokuguqa weTurret-TSINFA
Ulapha: Ekhaya1 / Turret Milling Machine
Machine uqoqo nkqo & Tye
Lo matshini ungasetyenziselwa zombini ukusila okuthe nkqo kunye nokugaya okuthe tyaba, kunye nokuncamathiselwa okuhambelana.Cylinder mill, isijikelezi sokujikeleza, ubume bokugaya kunye nokuphela kokugaya kungafakwa kumngxunya otyhidiweyo wesiseko somatshini, ofanelekileyo ukulungiselela umphezulu wenqwelomoya , indiza ye-oblique, i-groove, umngxunya, iigesi zazo zonke iintlobo zesamll, iindawo eziphakathi. Umsebenzisi unokukhetha intloko ekwahlulahlulahlula yonke ukuba icwangcise indawo yokufaka umsonto Sesona sixhobo silungileyo sokwenza machining kwimizi-mveliso yokwenza umatshini, ukungunda, iimoto nezithuthuthu. I-Tsinfa ngumboneleli oqeqeshiweyo kunye nomenzi we-turret milling machine e-China.
● Ifreyimu yomatshini inezinto ezinzima zokubamba kunye nokuqina kwethorsional
● Kubanzi. Rigid, iindlela ezinzima zesikhokelo ziqinisekisa uzinzo oluphezulu kunye nokuchaneka rhoqo
● Zonke iigiyeri kunye neeshafti ziqinisiwe kwaye zaphantsi
● Zonke izinto zombane zenziwa ngabavelisi abakhokelayo
● Ukutya okuzenzekelayo kunye nokondla okukhawulezileyo kuzo zonke izembe ezi-3
● Iphaneli yokulawula ibekwe kwi-swivel boom ukuze ibekwe kakuhle
● ukuthambisa ajikeleze Central umsebenzi olondolozo olusezantsi
Ngaba ufuna ikowuteshini?Sinike umnxeba ku + 86-15318444939, Kwaye uthethe nenye yeengcali zethu.Unokugcwalisa ifom yethu yoqhakamshelwano.
Nkqo ram uqoqo milling machine for sale:
Imifanekiso kunye neenkcukacha:
Bona ezinye iinkcukacha
Umsebenzi womatshini wokugaya weTurret wevidiyo:
Iimveliso umatshini wokugaya eziyeleleneyo:
Umatshini wokugaya we-WN736C
Ubungakanani betafile (mm): 1600 * 320
I-engile ejikelezayo kwintloko ejikelezayo: ± 360 °
Ubukhulu. I-engile ejikelezayo yetafile: 45 °
Umshini wokugaya Universal WN736A
Ubungakanani betafile (mm): 1600 * 360
Umshini wokugaya Universal WN736
Ubungakanani betafile （mm）: 1250 * 360
I-angle ejikelezayo kwintloko ye-awivel: ± 360 °
Umatshini wokugaya we-XN26A
Ubungakanani betafile (mm): 1120 * 260
Ubukhulu. I-engile ejikelezayo yetafile: -
Umatshini wokugaya we-XN32
Ubungakanani betafile (mm): 1250 * 320
Imoto ephambili (kw): 3kw
Ubukhulu. I-engile ejikelezayo yetafile: ± 45 °
Yintoni umatshini wokugaya uqoqo?
Umatshini wokugaya u-Turret luhlobo lomatshini wokugaya, owaqalwa ngenkulungwane ye-19. Ijongeka njenge-turret kwaye inegama layo. Ibandakanya indawo encinci, ine-rigidity elungileyo kunye nemisebenzi emininzi. Kufanelekile ukuba kusetyenzwe ezinye workpieces amancinci, ingakumbi kushishino nokuvunda. Amandla okugaya imingxunya, imingxunya yokomba, iindlela eziphambili, kunye neetafile ezijikelezayo okanye iintloko zokufakwa kwisalathiso se-helical machining. I-axis ethe tye inokuchongwa kwikholamu ukuqonda umsebenzi wokugaya othe tyaba.
Olu hlobo umshini wokugaya umqadi uyakwazi swing ukusuka ngapha nangapha, ekwabizwa ngokuba rocker, ingalo Umatshini wokugaya ingalo. Intloko yokugaya inokujikeleziswa ngasekhohlo nasekunene, kwaye emva naphambili, ngenxa yolu lwakhiwo, ukuze uluhlu lwayo lokuchwetheza lunwenwe.
Izahlulo umshini wokugaya Turret
Isiseko: Yenziwe nge-castings exhasa ubunzima bomatshini wokugaya ngelixa ugcina ukusika ulwelo. Zilungiswe emhlabeni ukuzinzisa isixhobo somatshini.
Ikholam: ikholamu ibekwe kwisiseko, kunye nebhokisi yolawulo lombane ecaleni, isikhokelo sikaloliwe ngaphambili, kunye netafile yokunyuka. Yinto ebaluleke kakhulu leyo
Ukusebenza kwetafile: Itafile yokusebenza kufuneka iqhubekise i-T-groove kwaye ilungise indawo yokusebenza nge-T-bolt
Screw lead: isikrufu esikhokelayo siqhuba i-nut ukuqhuba ukuhamba kwe-worktable, ihlala i-3, ngokulandelelana inoxanduva lokuhamba kwe-XYZ 3 axis.
Isixhobo esihamba ngesixhobo: Ukuba akukho sixhobo sihambahamba, ukujikeleza kwetafile kufuna ukujikeleza ngesandla kwesondo. Isixhobo sokuhamba sinokuqonda ukutya okuzenzekelayo ngokukhawuleza, ukugcina amandla kunye nokuphucula ukusebenza
Wokugaya intloko: enye yezona ndawo zibalulekileyo kumatshini wokugaya, ngqongqo entloko yokugaya umisela ngqo isiphumo machining. I-cutter ifakwe kwintloko yokugaya, intloko yokugaya iyajikeleza, iqhuba umsiki ukujikeleza, kunye neenkqubo zomsebenzi.
Imoto: Iimoto eziphambili ziqhuba ukujikeleza kwe-spindle. Iimoto Ukuphakamisa uqhuba itafile ukuya phezulu naphantsi.
Umboniso wedijithali: umgama ohambayo ulinganiswa ngumlawuli womboniso wedijithali kwaye uboniswe kwiscreen seLCD ukulungiselela abaqhubi
Umatshini wokugaya weTurret uyathengiswa
Umatshini wokugaya u-Turret njengomatshini wokugaya omncinci, ixabiso libiza kakhulu. Ixabiso lesalathiso loluhlu lujikeleze i-3000-9000USD. Ewe kunjalo, ngamanye amaxesha kuyakubakho amanyathelo okonyusa, anje ngexabiso lesaphulelo okanye izihlomelo ezongezelelweyo. Kuya kufuneka ubonisane nabathengisi kwiimeko ezithile.
Incwadana yokusebenza komatshini wokugaya
Iifayile zencwadana yokusebenza zinkulu kakhulu, ungacela abasebenzi bokuthengisa.